Tirada Xujayda Soomaaliyeed oo la kordhinayo sanadkaan – Radio Daljir
Tirada Xujayda Soomaaliyeed oo la kordhinayo sanadkaan
Diseenbar 24, 2018 5:29 b 0
Wasiirka arrimaha diinta iyo awqaafta ee xukuumadda faderaalka Soomaaliya Sheekh Nuur Maxamed Xassan iyo wasiirka xajka iyo cumrada ee Sacuudiga Dr. Maxamed Salalax Bin Dahir Bintin ayaa heshiis ku kala saxiixday wadanka Sacuudiga oo wasiirka uu booqasho ku joogo.
Heshiiska ayaa dhigaya in tirada xujayda Soomaaliyeed ee ah Sagaal kun iyo Sedex Boqol (9,300 ) oo Qof lagu darro Laba kun iyo Sadex Boqol , sidaasina laga dhigo sanadka dambe inay Soomaaliya kasoo xajiso Kow iyo Toban kun iyo Shan Boqol (11,500 ).
Kulanka oo saacado qaatay ayaa diiradda lagu saaray adeegyada lasiiyo xujayda Soomaaliyeed ee deegaanka iyo gaadiidkuba inay noqdaan kuwa dhamaystiran, aadna loo diyaariyay.
Xajka ayaa ka mid ah lixda tiir Islaamka, iyadoo umadda Soomaaliyeed ay %100 islaam yihiin ayaa xajka u ah mid ahmiyad wayn u xambaarsan.
Deni “Haddaan la helin nidaam siyaasadeed oo fadhiya, Garsoor caddaalad ah, Baarlammaan bulshada u dooda shuruucda ku habboonna u dajiya